एक महिनाको छुट दिइ ‘लकडाउन’ अबधि`भर घरभाडा नमा`ग्न सरकारको आग्रह !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/एक महिनाको छुट दिइ ‘लकडाउन’ अबधि`भर घरभाडा नमा`ग्न सरकारको आग्रह !!
एक महिनाको छुट दिइ ‘लकडाउन’ अबधि`भर घरभाडा नमा`ग्न सरकारको आग्रह !!
काठमाडौं- सरकारले शहरी क्षेत्रमा घरभाडामा ब`स्नेहरुको एक महिनाको भाडा छुट दिइ ‘लकडाउन’ अवधिभर भाडा नमा`ग्न सबै घर-धनीलाई आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरसको सम्भा`वित जो`खिमलाई रोक्न सरकारले लागू गरेको लकडाउन अवधि-भरको घर भाडा नमा`ग्न सरकारले आ`ग्रह गरेको हो।
बिहीबार मन्त्रि`परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चा`र तथा सूच`ना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विपतको बेला घरभाडा नलिएर घर-धनीहरुलाई मानवियता दर्शाउन आग्रह गरेका हुन् ।उनले कोभिड–१९ को विषम परि`स्थिति सहज भएपछि मा`ग्न अनुरो`ध गरेको हो ।
त्यस्तै, सरकारले एक महिनाको घरभाडाको छुट दिन समेत सं`बन्धित घरधनीहरुलाई अपि`ल गरेको छ । यदि त्यसो नभएमा सरकारले कडा`इका साथ अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे कार`बाही समेत गर्ने जनाएको छ । यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीकाे प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह गठन !!
हेर्दा हे`र्दै चितामा जलि`रहेको शव बा`ढीले बगायो, मला`मीको भागा`भाग (भिडियो सहित)